XOG DEG DEG AH: Warbaahinta Soomaalida Oo Warar Been Abuur Ah Ka Qoray Saadaasha Doorashadda Soomaaliland – Puntland24.net
Home Somalia, Wararka Maanta XOG DEG DEG AH: Warbaahinta Soomaalida Oo Warar Been Abuur Ah Ka Qoray Saadaasha Doorashadda Soomaaliland
XOG DEG DEG AH: Warbaahinta Soomaalida Oo Warar Been Abuur Ah Ka Qoray Saadaasha Doorashadda Soomaaliland
Xalay fiidkii 6:00 PM, ayaa laso xiray Codbxiintii shacabka Soomaaliland, waxaana bilaabatay tirinta codadka ay dhiibteen Muwaadiniinta Soomaaliland.
Inkasta oo Warbaahinta Soomaalida ay qorayaan Warar iska saadaal iyo mala awaal u badan, hadana illaa iyo hadda lama yaqaan Mushara ku horeeya Doorashadda, waana adag tahay sida lagu ogaado.
Puntland24 ayaa ogaaday in Guddiga Doorashadda Soomaaliland ay xakameeyen in Xog la helo haba yaraate, waxaana ay ku dadaalayaan inay Doorashaddu ku dhamaato natiijo si wannaagsan, isla markaana uusan hadal kaso noqon.
Iyaga oo xoojinaya inaysan Doorashaddu khalkhal galin ayay jareen Internetka guud ahaan si aan loo arag bulsho dabaldegaya iyada oo aan natiijo lagu dhawaaqin, isla markaana aan loo khaldin hannaanka ay wax u socdaan.
17-ka bisha ayaa lagu dhawaaqayaa natiijada rasmiga ah ee Doorashadda, waxaana inta ka horeysa aan la ogaan karin Xogta cida guulaysatay, inkasta oo maalinta ugu dambaysa Saadaasha soo baxdaa ay run u dhowaan kartro ka hor inta aan lagu dhawaaqin Doorashadda.
Warbaahinta Soomaalida ayaa saaka Wararkooda kuso qaatay Warar aan sal iyo raad lahayn, waxaana qof kasta uu qoray wixii uu jecel yahay.
Soomaaliland Doorashadeeda, wax badan ayaa saameeya oo ay ka mid tahay deegaan, Qabiil iyo dhaqaale, waana mida keentay innaan la saadaalin karin natiijada.